GIS Manifold - Bogga 2 - Geofumadas
Waqti ka hor waxaan soo bandhignay qaab qadiim ah sida ay ugu suurtagashay in lagu xiro adeegyada OGC iyadoo la adeegsanayo Microstation, waxaan xasuustaa Keith inuu ii sheegay in nooca soo socda uu yeelan doono awooddan. Ku xirnow Si aad u hesho, marwalba waxaa lagu sameeyaa maareeyaha raajada oo hadda, marka lagu daro ku darista feylka iyo adeegga muuqaalka, xulashada khariidada mareegaha ayaa u muuqata ...
Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Buugga GIS Manifold ee isticmaalka degmada
Waqti ka hor waxaan soo sheegay inaan ka shaqeynayay buug ku saabsan hirgelinta Nidaamyada Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS. Ka dib markii la ogeysiiyey, dhowr ka mid ah ayaa faallo ka bixiyay inay xiiseynayaan inay ogaadaan dukumintiga, marka la eego xaqiiqda ah in noocan noocan ah waa in la shaaciyo si kuwa kale ay u isticmaali karaan, u wanaajin karaan una soo gudbin karaan ra'yi, halkan ...
cadastre, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Maanta, Maarso 16, Manifold wuxuu sameeyay war-saxaafadeed, kaas oo uu kaga hadlayo mudnaanta nooca 9aad ee badeecadiisa ay qaadaneyso. Marka loo eego waxa ay yiraahdeen, Manifold GIS 9 wuxuu aadayaa suuqa nuska hore ee 2009, Chrisna mar hore ayuu ka hadlay ...
Si fudud waa shaqo titanic ah oo adeegsade Manifold la yiraahdo tomasfa uu qabtay oo yaa soo galiyay barta qalabkaas. Waxay i xasuusineysaa shaqadaas oo uu sameeyay Arthur J. Lembo markii uu qabtay shaqo aad u nidaamsan oo ku saabsan sida loo sameeyo isla jaangooyada ArcGIS iyo Manifold. In ka badan dareenka isbarbardhiga ayaa ii yeeray ...
Qoraalkan waxaan ku arki doonaa sida loo abuuro khariidad wax soo saar ama waxa aan ugu yeerno qaab dhismeed iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS. Waxyaabaha aasaasiga ah Si loo abuuro qaab-dhismeed, kala-shaandhayn ayaa u oggolaanaysa in qaab-dhismeedka xogta la buuxiyo, ama sida khariidad la yaqaan, in kasta oo ay ku dhex jiri karto galka ama la xiriiri karto lakab ama shay kale oo ...
Maalmo ka hor waxaan ka fiirsaday tijaabinta in Netbook noocan oo kale ahi ka shaqeeyo jawiga dhulka, xaaladdan waxaan tijaabiyey Acer One oo farsamayaqaannada miyiga qaarkood iga codsadeen inaan ku soo booqdo booqashada magaalada. Tijaabadu waxay iga caawisay inaan go'aansado haddii soo-iibintayda soo socota aan maalgashado HP kale oo sare ...
Geospatial - GIS, IntelliCAD, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Sida loo abuuro hyperlinks ee Manifold GIS
Hay'addu Markay tahay Janaayo 9, 2009 shirkii Skidmore College ee barayaasha ayaa la qaban doonaa. Tani waa hay'ad ku taal magaalada New York Si aad fikrad uga hesho xaruntan, kuwani waa tirooyinkeeda: 1903 Sanadkii aasaaska 2,400 Arday 44 Gobol oo matalayay 32 Dal oo matalayay 9: 1 Saamiga Ardayga…
Sirdoonka Ganacsiga, GIS ee Ganacsiga
Waxaan arkay kiiska qiyaastii sanad ka hor, aniga iyo qaar ka mid ah asxaabta sigaarka caba (sigaar cabista) halka aan u sameynayo nidaam koox bangiyo caalami ah. Gaar ahaan, waxay ku saabsan tahay juquraafinta dadka haysta kaarka amaahda, taasi waxay ahayd odyssey iyadoo la tixgelinayo in cinwaanada lagu qoray ku dhowaad farshaxanka dhagaxa ah. Laakiin natiijada ugu dambaysay waxay ahayd hawl maalmeedyo fudud ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, tabo cusub, GIS kala cayncayn ah
Tani waa liiska 60-ka eray ee loogu raadinta badan yahay Geofumadas sanadkii 2008: 1. Summad u gaar ah, (1%) kani waa erayga furaha ee booqashooyin badan ay yimaadeen, guud ahaanna waxaa isticmaala kuwa horay u yaqaanay baloogga, kuwaas oo Had iyo jeer ma aqriyaan rss sidoo kale kuma haystaan ​​dookhooda, taasna waa ...
AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Akhriso inta aan soo noqdo
Waan safrayaa, dib ayaan u eegay warbixinnada waxaanan qorsheynayaa fasaxeyga. Waxaan kaaga tegayaa mustaqbalka X, dabeecadda uu abuuray wiilkaygu, wuxuu ku sameeyay barnaamij 3D ah oo loogu talagalay carruurta oo u eg Plopp ... 19 doollar oo u qalma marka aad leedahay cunug hal abuur leh. By habka, ku talin laba akhris oo xiiso leh. Codsanaya Software ...
AutoCAD-AutoDesk, GIS kala cayncayn ah
Ganacsiyada tiknoolajiyada wanaagsan ayaa had iyo jeer buuxiya baahiyaha aan la daboolin ee loogu talagalay alaabooyinka jira ama hagaajiya awooddooda. Maalmihii la soo dhaafey waxaan ka hadleyney Manifold adeegyadiisa IMS, oo in kasta oo aysan u dhigmin haysashada GisServer, haddana aysan ku kacayn $ 35,000 halkii processor. Kiiskeyga waxay ila tahay in Manifold uu yahay ...
Dhibaatooyin badan oo leh Manifold IMS
Maanta waxaan arki doonaa sida loo abuuro adeegga daabacaadda khariidada iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS IMS. Haddii aad haysato bixiye kayd ah, ruqsadda runtime ee Manifold Enterprise waa in lagu rakibaa. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonaa Mapserving, degel bixisa marti gelin iyo adeeg daabicid loogu talagalay xogta Manifold. Waxaa jira tiro khariidado ah oo wanaagsan ...
Su'aalaha ku saabsan IIS, IMS iyo Manifold GIS
Kajawaabida su'aalaha kulankeygii ugu dambeeyay ee aan laqaatay farsamo yaqaan jabinta qumbaha dowladaha hoose abuurista adeegyada daabacaadda ee Manifold GIS, si loo dhameystiro buugga Manifold ee aan horay u soo sheegay. Ujeedada loo abuurayo adeegyadan ayaa ah in waaxda 'cadastre' ay u adeegi karto xogta, iyada oo aan ...
blog GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
IMS Manifold, oo wax badan samaynaya
Qoraalkii hore waxaan ku aragnay sida loo abuuro adeeg IMS ah, oo lagu rakibay sheybaarka aasaasiga ah ee guji ee ku yimid qaab ahaan. Hadda aan aragno sida loo sameeyo isdhexgalka mid ka mid ah iyo khariidad kale iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarrada iskuxirayaasha iyo koodhka qaarkood. Mashruucu wuxuu ku saleysan yahay khariidada Mareykanka, oo leh ...
ScanControl waa degel leh waxyaabo badan oo la soo bandhigi karo, laakiin midka sida aadka ah indhahayga u soo jiitay ayaa ah inay markii ugu horreysay soo bandhigtay muuqaallo taxane ah oo muuqaal ah oo ArcGIS ah, taas oo aan layaab ahayn maxaa yeelay waa aalad aad loo jecel yahay; laakiin waxa xiisaha leh ayaa ah inay sidoo kale soo bandhigeyso taxane ah fiidiyowyo Manifold GIS ah, ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 6 page Next